TomTom Curfer na-egosipụta arụmọrụ anyị dị ka onye ọkwọ ụgbọala | Akụkọ akụrụngwa
TomTom Curfer na-egosipụta arụmọrụ anyị dị ka ndị ọkwọ ụgbọala
Miguel Hernandez | | Ngwa, GPS
Foto site na: Slashgear
TomTom, ndị isi ụlọ ọrụ na nsuso GPS ka webatara - Curfer, ngwaọrụ ọhụụ nwere ọtụtụ ihe, Ọ bụghị naanị na ọ ga-enwe nchekwa data dị mkpa na nyocha oge nke ụgbọ anyị, mana ọ ga-enyekwa data gbasara ụzọ anyị si anya ya na etu anyị siri arụ ọrụ na wiilị. TomTom anaghị akwụsị ịtụ anyị n'anya site na ngwaọrụ ya. Lọ ọrụ ahụ nwere aha mara mma na mpaghara a yana ngwaọrụ Curfer ọhụrụ ya enweta ọchị nke ọtụtụ ndị ọchụnta ego na ndị ọkwọ ụgbọ ala oge niile. Anyị na-agwa gị ihe ngwaọrụ a dị iche iche mejupụtara, ọ na-ahụghị n'ime ụgbọ ala gị, mana ọ nweghị otu nkọwa zuru ezu.
Ngwaọrụ a banyere n'ọdụ ụgbọ mmiri OBD Nke ahụ gụnyere ọtụtụ ụgbọ ala, dịka ị maara nke ọma, bụ nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị ọkachamara pụrụ iche na-eji ohere iji nyocha na nyocha na ọnọdụ ụgbọ ala ahụ site na kọmpụta nọ. The ngwaọrụ ga-enwe ike ikpebi data dị ka peculiar dị ka braking arụmọrụ, ndị G-ike anyị na-atachi obi mgbe ụgbọala na osooso data. Na mgbakwunye, ọ ga-enye anyị akụkụ ndị ọzọ dịka okpomoku mmanụ, batrị batrị na ọtụtụ ndị ọzọ. N’adịghị ịtụnanya mana ọ bụ eziokwu, anyị agaghị agha ụgha na-ekwu na ngwaọrụ ọhụụ anaghị atụ anyị n’anya.
Na Curfer, ndị ọrụ ga-enweta ihe mgbaàmà na-acha ọbara ọbara mgbe ụfọdụ oke na-aga karịa nkịtị, dị ka ọnọdụ mmanụ. N'ezie, anyị nwere ike ịhụ ebe ụgbọ ahụ dị maka nsuso GPS, ọ gaghị efu site na ngwaọrụ TomTom. Ngwaọrụ a ga-eri naanị € 60 ma aga-ebido ya na Holland, France, Germany, Belgium na United Kingdom. Ahịa ndị dị ka Spain na United States of America ga-efunahụ ohere ịnụ ụtọ TomTom Curfer opekata mpe na mbido. Mee ka ịkwọ ụgbọala gị ka mma site na iji data ọ na-enye gị nke ọma ma ị nwere ike ịchekwa mmanụ na nrụzi.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị bipụtara ndepụta nke mmemme imelite TomTom gị n'efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » TomTom Curfer na-egosipụta arụmọrụ anyị dị ka ndị ọkwọ ụgbọala
LGV 20 ga-adị na agba; isi awọ obodo, ọlaọcha ụtọ ma ọ bụ pink pink
Nke a bụ ọtụtụ mmadụ na beta nke Oku ọrụ: Agha Na-enweghị ngwụcha